Nhasi Mune Nhoroondo - Kurume 19th
Nhasi muNhoroondo ndiChitatu, Kurume 19, zuva rechimakumi masere nemasere ra78. Kwasara mazuva mazana maviri nemakumi maviri nesere pagore.
Yazvino Yakasimudzira mu Nhoroondo:
Musi waKurume 19, 1979, iyo US House of Representatives yakatanga kutepfenyura mafambiro ayo epasi; chikafu chaicho chakatakurwa neC-SPAN (Cable-Satellite Public Affairs Network), iyo yaive ichitanga kutanga kwayo.
Muna 1687, muongorori wechiFrench Rene-Robert Cavelier, Sieur de La Salle - wekuEurope wekutanga kufamba kureba kweRwizi rweMississippi - akaurayiwa nevatongi muTexas yanhasi.
Muna 1863, Confederate cruiser Georgianna, parwendo rwayo rwekutanga, yakakwenenzverwa kubva kuCharleston, SC, kuenda kudzivirira kubva pakuwira mumaoko eUnited.
Muna 1918, Congress yakabvumira nguva yekuchengetedza masikati.
Muna 1920, Seneti yakaramba, kechipiri, Chibvumirano cheVersailles (vehr-SY ') nevhoti makumi mana nenomwe, 49 vachipokana, vachikundikana pazvikamu zviviri kubva muzvitatu zvaidiwa kuti zvibvumirwe.
Muna 1931, Nevada Govhuna Fred B. Balzar akasaina chiyero chinobvumidza kubhejera kasino.
Muna 1945, vanhu 724 vakaurayiwa apo bhomba reJapan rekudonha rakarwisa mutakuri USS Franklin Japani; chikepe, zvisinei, chakaponeswa. Adolf Hitler akaburitsa yake inonzi "Nero Chirevo," achiraira kuparadzwa kwenzvimbo dzeGerman dzinogona kuwira mumaoko eAllied.
Muna 1953, mhemberero yeAcademy Awards yakatepfenyurwa kekutanga; "Chiratidziro Chikurusa Panyika" chakatumidzwa zita rakanakisa mufananidzo wa1952.
Muna 1965, kuparara kweConfederate cruiser Georgianna kwakawanikwa naE. Lee Spence, makore makumi maviri nemaviri kusvika pazuva raive raputirwa.
Muna 1976, Buckingham Palace yakazivisa kupatsanurwa kwaPrincess Margaret nemurume wake, Earl weSnowdon, mushure memakore gumi nematanhatu ekuroora.
Muna 1987, muterevhizheni Jim Bakker akasiya chigaro chake sasachigaro wesangano rake rePTL pakati pekunyadziswa kwepabonde nemari pakati paJessica Hahn, aimbova munyori wechechi.
Muna 1993, Dare Repamusorosoro Mutongi Byron R. White vakazivisa hurongwa hwekurega basa. (Kuenda kwaWhite kwakagadzira nzira yekuti Ruth Bader Ginsburg ave mutongi wedare rechipiri remukadzi.)
Muna 2003, Mutungamiri George W. Bush vakaraira kutanga kwehondo neIraq. (Nekuda kwemusiyano wenguva, kwaive kutanga kwaKurume 20 muIraq.)
Makore gumi apfuura: Mutungamiri George W. Bush, pachiitiko chekutanga chehondo yeIraq, vakakurudzira kubatana muhondo yekurwisa hugandanga. Mutungamiri weTaiwan Chen Shui-bian (jehn shwee bee-ehn) uye mutevedzeri wake mutungamiri vakapfurwa uye vakakuvadzwa zvishoma mukuedza kuuraya kwekupedzisira pazuva rekupedzisira remushandirapamwe wemutungamiri weTaiwan. Mauto akarasa mhosva dzese dzavaipomera Capt James Yee, mufundisi wechiuto wechiMuslim kuGuantanamo Bay, Cuba, uyo aipomerwa mhosva yekubata zvisakafanira ruzivo rwakavanzika.
Makore mashanu apfuura: Dare redzimhosva reAustria rakatongera Josef Fritzl, 73, ku upenyu muwadhi rezvepfungwa rekuvharira mwanasikana wake mugomba kwemakore makumi maviri nemana, kumuberekera vana vanomwe uye kurega wechisere achifa ari musungwa se nyowani. Papa Benedict XVI, achishanyira Cameroon, akaudza vatungamiriri vechiMuslim kuti chitendero chechokwadi chinoramba mhirizhonga; pontiff akabatawo kugarisana murunyararo pakati pechiKristu neIslam munyika "sechiedza kune mamwe marudzi eAfrica."
Rimwe gore rapfuura: Papa Francis akatanga zviri pamutemo hushumiri sa papa wechi266, achitambira rin'i inomiririra hupapa uye nemvere dzakabiwa dzichiratidza basa rake semufudzi weboka rake rakasimba-bhiriyoni imwe nemazana maviri panguva yeMisa kuVatican. Vapanduki vakaita mhepo yekubhomba muIraq iyo yakauraya vanhu vangangoita makumi matanhatu nevashanu. Harry Reems, makore makumi matanhatu nemashanu, yechirume nyeredzi ye1.2 yakakura-firimu yechinyakare "Zvakadzika Nyama," akafira muSalt Lake City, Utah.
Mazuva Ekuzvarwa Anhasi: Aimbova chipangamazano wezvekudzivirirwa kwenyika weWhite House Brent Scowcroft ane makore makumi masere nemapfumbamwe. Mudzidzisi wezvechitendero Hans Kung ane makore 89. Muimbi weJazz Ornette Coleman ane makore makumi masere nemasere. Munyori Philip Roth ane makore makumi masere nemasere. Actress Renee Taylor ane makumi masere nemasere. Actress-muimbi Phyllis Newman ndiye 81. Actress Ursula Andress ane makore 78. Muimbi Clarence "Frogman" Henry ane makore 77. Muimbi Ruth Pointer (The Pointer Sisters) ane makore 68. Actress Glenn Close ane makore 67. Mugadziri wefirimu Harvey Weinstein ane makore 62. Actor Bruce Willis ane makore 59. Actress-comedian Mary Scheer ane makumi mashanu neshanu. Mutambi wemitambo Neil LaBute ane makore makumi mashanu nemapfumbamwe. Actor Connor Trinneer ane makore makumi mashanu nemashanu. Muimbi weRock Gert Bettens (K's Choice) ane makore 51. Rapper Bun B ane makore makumi mana. Muimbi wedombo Zach Lind (Jimmy Eat World) ane makore 51. Actress Abby Brammell ndiye 45. Actor Craig Lamar Traylor ane makore 44. Actor Philip Bolden ane makore 41.
Haugone Kufamba Imbwa Yangu Nekuda KweSinou - Imbwa Wiricheya Skis